बंगलादेशका प्रशिक्षक भन्छन् “नेपाल दावेदार” – Khel Dainik
बंगलादेशका प्रशिक्षक भन्छन् “नेपाल दावेदार”
काठमाडौं (खेलदैनिक)। थ्र्री नेशन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बंगलादेशका मुख्य प्रशिक्षक जेम्स डे ले नेपाललाई उपाधिको बलियो प्रत्याशी बताएका छन् ।
सोमबार सोल्टी होटलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डे भन्छन्, “आयोजक राष्ट्र भएकाले पनि नेपाल उपाधिको बलियो प्रत्याशी हो । हामी हाम्रो प्रदर्शनलाई सुधार्न चाहन्छौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै प्रदर्शनमा सुधार गर्नु हो ।”
उता किर्गिस्तान ओलम्पिक टोलीका प्रशिक्षक झोल्डोसोव नुर्वेकले प्रतियोगिता आफ्नो टोलीका लागि सिक्न र अनुभव बटुल्नका लागि उपयुक्त रहेको बताएका छन् । नुर्वेकले आफूहरुले सोंचेजस्तो तयारी गर्न नसके तापनि बंगलादेश र नेपाल विरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गर्ने बताए ।
स्मरण रहोस, प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा मंगलबार बंगलादेश र किर्गिस्तान भिड्दै छन् । नेपालले आफ्नो पहिलो खेल चैत्र १२ गते किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ । त्यस्तै १४ गतेका दिन बंगलादेशसँग खेल्नेछ । लिग चरणको खेलपश्चात् शिर्ष दुई टोली चैत्र १६ गते फाइनलमा भिड्ने छन् ।
← लामो समयपछि दर्शकहरुका माझ खेल्न उत्साहित छन् रोहित थ्री नेशन्स कप फुटबल आजदेखि →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने चैत्र ९, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? चैत्र ९, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली चैत्र ९, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा चैत्र ९, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित चैत्र ९, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा चैत्र ९, २०७७